तिथि मेरो पत्रु » विवाहको बिन्दु के छ?
द्वारा Veranda Hillard
अलग धार्मिक कारण देखि, परंपरागत, एक प्रयास मा विवाह मानिसहरू एकअर्कालाई एक आजीवन प्रतिबद्धता जमना गर्ने. बीसौं शताब्दीको अन्त भएकोले, विवाह मा गिरावट भएको छ र, समग्र, मान्छे अघिल्लो पुस्ताका भन्दा जीवनमा पछि विवाह गर्ने गर्छन. यस नयाँ प्रवृत्ति बावजुद, Kefalas एट. गर्न. यस लेखमा "विवाह नगरी सँगै हुँदा अधिक छ" , जवानहरू मूल्य विवाह गर्न जारी र उनको भविष्य को एक सार्थक घटक रूपमा हेर्ने कि भन्छन्. आज, अन्य अपारंपरिक चयन गर्न बाटो भन्दा गाँठ सुन्ने हुन सक्छ, तथापि, विवाह देखि प्राप्त गर्न अझै पनि धेरै फाइदा हो.
विवाह घनिष्ठ सम्बन्ध लागि मानव जगतले 'अत्यावश्यक आवश्यकता पूरा. आदर्श, विवाहित दम्पतीले सँगै जीवन अनुभव र तिनीहरूले बूढो रूपमा छेउमा कसैले गर्न अवसर दिइन्छ. बलियो र. अल।, पुस्तकमा "यस विवाह र परिवार अनुभव: एक परिवर्तन समाज "भनेर विवाह र पारिवारिक जीवन व्याख्या मा घनिष्ठ सम्बन्ध सामान्यतया एक व्यक्ति भावनात्मक सुरक्षा र समर्थन प्राप्त जसबाट स्रोतहरू छन्. विवाह मार्फत, दुई साथीहरू भविष्यको लागि आफ्नो घनिष्ठ आशा र सपना साझेदारी र जीवन अनुभव चुनौतीपूर्ण समयमा सान्त्वना पाउन सक्छ.
सामान्य स्वास्थ्य र हित
विवाह विवाह गर्ने दुवै शारीरिक र मनोवैज्ञानिक लाभ र साधारणतया मानिसहरू स्वस्थ र अधिक सन्तुष्ट छन् प्रदान गर्दछ. यसबाहेक, विवाहको सामाजिक समर्थन पक्ष टर्मिनल रोगहरूबाट सुरक्षा कारक प्रदान. अनुसन्धानकर्ताहरूले र Aizer. अल।, अध्ययन मा "वैवाहिक स्थिति र क्यान्सर संग विरामीहरु को बचाउको", विवाहित मान्छे क्यान्सर संग प्रस्तुत हुने सम्भावना कम हुन्छ कि फेला, उपचार प्राप्त गर्ने बढी सम्भावना, र सम्भावना कम अविवाहित मानिसहरू भन्दा रोग मर्न. यो क्यान्सर को एक किसिम को लागि साँचो छ, स्तन रूपमा, फोक्सोको, प्रोस्टेट, कोलोरेक्टल र अन्य टर्मिनल रोग.
स्वस्थ बच्चाहरु र परिवार
विवाह एक बच्चा हुर्काउन संस्थाको रूपमा स्थापित र यो अझै पनि आज त्यो उद्देश्य कार्य गर्दछ थियो. यो मात्र एक बच्चा हुर्काउने पक्कै संभव छ, जबकि, छोराछोरी निष्पक्ष दुवै आमाबाबु संग घर मा खडा राम्रो जब. अध्ययन मा, "कम-आय आमाले’ साझेदारी अस्थिरता र किशोरकिशोरीहरू प्रतिमान’ सामाजिक-भावनात्मक हित ", Bachman र. गर्न. भन्छन् कि एकल-आमा वा cohabitating परिवारमा हुर्केको छोराछोरीलाई भन्दा किशोरावस्थामै एक दुई-आमा घर प्रदर्शनी कम delinquency र अभिनय-बाहिर व्यवहार हुर्केको बच्चाहरू. यस्तो बुबा संलग्न र कम आर्थिक कठिनाइ रूपमा एक दुई-आमा घर मा उपस्थित तत्व विकास छोराछोरीको लागि अधिक स्थिरता प्रदान.
विवाह हुनुको एकल वा अविवाहित भन्दा बढी आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्दछ. ठेस स्पष्ट वास्तवमा देखि दुई paychecks एक असल हो कि, विवाहित मानिसहरू धेरै आर्थिक फाइदा छ. विवाहित दम्पतीले छिटो अविवाहित मानिसहरू भन्दा धन र सम्पत्ति जम्मा. साथै, यस लेखमा "म ... बचत गर्न चाहनुहुन्छ", Knoll र. गर्न. युवा वयस्क विवाहित दम्पतीले अविवाहित व्यक्तिहरूलाई भन्दा रोजगारदाताले आधारित अवकाश खातालाई गर्न योगदान सम्भावना बढी हो कि निर्धारण. प्रारम्भिक जीवन मा वित्तीय योजना आर्थिक स्थिति को एक कारक हो भन्ने विचार पछि जीवन मा यो कारक विवाहित मान्छे को लागि सबै भन्दा फाइदाजनक छ.
5 कुराहरू हस्तिहरु नाता हाम्रो बारे सिकाउन सक्छन्